MAAMULKA SHIRKADA “KAAH BUSINESS GROUP” OO SHIR KULA YEESHAY JAALIYADDA SL EE NORWAY XARUNTA JAALIYADDA EE MAGAALADA OSLO | WWW.SOMALILAND.NO
dan gar on Daawo muuqaalka shirweynaha…Hamsa Mohamed on Maxaa Inoo Qabsoomay Maxaase I…Ali on Waxan Rajeynayaa in Boolisku a…jamac on Gobolka Sanaag oo xaalad dagaa…Mire on WARGEYSKA GEESKA AFRIKA OO WAR…	MAAMULKA SHIRKADA “KAAH BUSINESS GROUP” OO SHIR KULA YEESHAY JAALIYADDA SL EE NORWAY XARUNTA JAALIYADDA EE MAGAALADA OSLO
Posted on March 17, 2008 by Abdirisak Fadal	“waxa shirkadu wax ka bedeshay qaab dhimeedkii iyo In jaajuurkii lagu bedelay lebenka yar-yar ee lagu dhiso guryaha Yurub. Lebenkaa oo ka adag kana sibidh qaadasho yar jaajuurka.”
“waxa kale oo shirkadu soo kordhin doontaa guryaha shirkaduhu dhisaan ee loo yaqaan “real state-ka” kuwaas oo markay dhisto ay dadka kaga iibin doonto habkan soomaalidu u taqaan “haftada”, qofkuna uu marba qeyb iska bixin doono.” Maamulaha “Kaah Business Group”
Cismaan Kaahin Axmed
Oslo(sl.no), 17.march – Shir si heer sare ah loo agaasimay ayaa 15.03.08 ka dhacay magaaladan Oslo. Shirkaa oo ku saabsanaa Suuqgeyn iyo Bandhig muujinayey qaabka shirkada Kaah qeybteeda dhismuhu wax u dhisto. Shirkadaas oo ka mid ah shirkadaha dhismaha ee ka jira wadankii.
Waxa shirka furay hayeyna xagga xidhiidhinta Cabdiraxmaan “lisaaye” oo ah wakiilka shirkada ee Norway. hadalkana wuxu ku bilaabay warbixin kooban oo ku saabsan shirkada iyo waaxyaheeda kala duwan. Kuwaas oo ka kooban waaxda dhismaha, waaxda ka ganacsiga qalabka dhismaha iyo waaxda dabsiinta(laydhka) magaalada Hargeysa.
Waxa iyana goobtaa ka soo jeediyey wacdi ku saabsan faa´iidada shirkadaha iyo maalgashiga Sheekh Cabdiqaadir Cali Cambe iyo Sh. Cabdiraxmaan “Awga” oo iyagu ku dheeraaday in ganacsiga iyo shirkadu u baahan yihiin samir fara badan iyo dadka shirkada noqonaya oo is aamina. Taa bedelkeedana ay shirkadoodu najaxeyso.
Intaa ka dib waxa hadalkii la wareegay Cismaan Kaahin Axmed oo isagu ah Maamulaha Shirkada iyo waliba Mulkiilaha “City Hotel”. Hudheelkaa oo muddo dhawr todobaad hadda laga jooggo laga furay magaaladda Hargeysa. Cismaan mahadnaq ka dib wuxu hadalkiisii ku bilaabay Waxa aan idiinku nimi in qurbo joogga aan ku dhiiri gelino inay maalgashadaan wadankii. Waxan kale oo aan idiin soo bandhigayaa waxqabadka shirkada dhismaha ee Kaah iyo waxa ay kaga duwan tahay shirkadaha dhismaha ee kale.
Isagoo ka hadlaya fursadaha maalgashi iyo in dalkii qofka fikrad iyo dhaqaale la tagaa uu faa´iido deg-deg ah ka sameynayo. Waxaanu tusaale u soo qaatay isaga laf ahaantiisu inu ka mid ahaa qurbo joogii degenaa dalka Ingiriiska, sanadkii 2004-tiina uu u guuray dalkii kana bilaabay ganacsi. Ganacsigaa oo aad idinkuba indhihiina ku aragtaan horumarka iyo faa´iidada deg-dega ah ee uu sameeyey. Haddaba, dad badan oo idinka mid ah ayaa haya fikradii iyo dhaqaalihii ee kaalaya dalkii oo maalgashada.
Xagga shirkadda iyo waxay kaga duwan yihiin shirkadaha kale wuxu ka sheegay in qaab dhimeedkii ay wax ka bedeleen iyo In jaajuurkii ay ku bedeleen lebenka yar-yar ee lagu dhiso guryaha Yurub. Lebenkaa oo ka adag kana sibidh qaadasho yar jaajuurka. Waxa kale oo uu carabka ku dhuftay in ay soo kordhin doonaan guryaha shirkaduhu dhisaan ee loo yaqaan “real state-ka” kuwaas oo markay dhisaan ay dadka kaga iibin doonaan habkan soomaalidu u taqaan “haftada”, qofkuna uu marba qeyb iska bixin doono. Waxaana uu sheegay inay ku talo jiraan inay bilaabaan sanadkan dabayaaqadiisa.
Cismaan halkaa wuxu dadkii isugu yimi ku daawadsiiyey film muujinaya waxay shirkadu ku soo kordhisay suuqa dhismaha ee SL iyo waliba guryo aad u qurux badan oo lagu faah-faahineyey inta qaybood ee dhisme waliba ka kooban yahay.
Ugu dambeyntii waxa halkaa Cismaan iyo Masuuliyiintii la socotay jaaliyaddu ku waydiisay suaalo khuseeyey mashruucan. Taas oo masuuliyiinta shirkadu si aqooni ku dheehan tahay ugaga jawaabeen dadkii goobtaa isugu yimi. Waxaana shirkaasi ku gaba-geboobay jawi aad u qurux badan iyo masuuliyiinta shirkada oo goobtaa ka sheegay qofkii u diyaar ah maalgashi xilligan in ay gaar u qaabilayaan.
Filed under: Norway, Warka « Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Axad,16 March WAR SAXAAFADEED GUDOOMIYAHA URURKA QARAN “Dr. Maxamed Cabdi Gaboose”: MAAMUL XUMIDA IYO QORSHE LA´AANTA XUKUUMADU WAXAY DHALISAY ABUURID LA´AAN ILO DHAQAALE »